Bible Mu Nsɛm Mmofra Baanu a Wonya Nkwa Bio - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
SƐ WUWUI na wɔsan de wo baa nkwa mu a, anka wo maame bɛte nka dɛn? Anka n’ani begye pii! Nanso so obi a wawu betumi abɛtra ase bio? So ebi aba pɛn?
Hwɛ ɔbarima a ogyina ha no, ne ɔbea no ne abofra no. Ɔbarima no yɛ odiyifo Elia. Ɔbea no yɛ okunafo a ofi Sarefat, na abofra no yɛ ne ba. Da koro abofra no yaree. Ne yare no mu yɛɛ den araa ma owui. Afei Elia ka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: ‘Fa abofra no ma me.’
Elia de abofra a wawu no foroo aborɔsan no de no kɔtoo mpa so. Afei ɔbɔɔ mpae sɛ: ‘O Yehowa, ma abofra no mmra nkwa mu bio.’ Na abofra no fii ase homee! Ɛnna Elia san de no sian baa fam, na ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: ‘Hwɛ, wo ba no anya nkwa!’ Ɛno nti na ne maame ani agye saa.
Yehowa diyifo titiriw foforo nso ne Elisa. Na ɔyɛ Elia boafo. Nanso bere bi akyi no Yehowa nam Elisa nso so yɛɛ anwonwade ahorow. Da koro Elisa kɔɔ Sunem kurom, na ɔbea bi yɛɛ no ayamye kɛse. Ɔbea yi woo ba akyiri yi.
Da koro anɔpa, bere a abofra no anyin no, ɔkɔɔ n’agya nkyɛn wɔ afum. Mpofirim ara abofra no teɛɛm sɛ: ‘Me ti!’ Bere a wɔde no baa fie no, abofra no wui. Hwɛ awerɛhow ara a ɛkaa ne maame! Ntɛm ara na ɔkɔfaa Elisa.
Bere a Elisa bae no, ɔde abofra a wawu no kɔɔ dan mu. Ɔbɔɔ Yehowa mpae, na obutuw abofra no so. Ankyɛ na abofra no ho san yɛɛ hyew, na abofra no nwansii mpɛn ason. Ne maame ani gyei dɛn ara bere a obehui sɛ ne ba no anya nkwa no!
Nnipa pii awuwu. Eyi ama wɔn mmusua ne wɔn nnamfo adi awerɛhow. Yenni tumi a yɛde benyan wɔn. Nanso Yehowa betumi. Akyiri yi yebehu sɛnea ɔde nnipa ɔpepem pii bɛsan aba nkwa mu.
1 Ahene 17:8-24; 2 Ahene 4:8-37.
Henanom ne nnipa baasa a wɔwɔ mfonini no mu no, na dɛn na ɛtoo abofra no?
Mpae bɛn na Elia bɔ faa abofra no ho, na dɛn na afei esii?
Dɛn ne Elia boafo no din?
Ɛyɛɛ dɛn na wɔfrɛɛ Elisa kɔɔ ɔbea bi a ofi Sunem fie?
Dɛn na Elisa yɛe, na dɛn na ɛbaa abofra a wawu no so?
Tumi bɛn na Yehowa wɔ, sɛnea ɔnam Elia ne Elisa so daa no adi no?
Kenkan 1 Ahene 17:8-24.
Ɔkwan bɛn so na wɔsɔɔ Elia setie ne ne gyidi hwɛe? (1 Ahe. 17:9; 19:1-4, 10)
Dɛn na ɛma okunafo a ofi Sarefat no gyidi da nsow? (1 Ahe. 17:12-16; Luka 4:25, 26)
Ɔkwan bɛn so na okunafo a ofi Sarefat no asɛm no di adanse sɛ Yesu nsɛm a ɛwɔ Mateo 10:41, 42 no yɛ nokware? (1 Ahe. 17:10-12, 17, 23, 24)
Kenkan 2 Ahene 4:8-37.
Dɛn na ɔbea a ofi Sunem no kyerɛ yɛn fa ahɔhoyɛ ho? (2 Ahe. 4:8; Luka 6:38; Rom. 12:13; 1 Yoh. 3:17)
Akwan bɛn so na yebetumi ayi ayamye adi akyerɛ Onyankopɔn asomfo nnɛ? (Aso. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Heb. 6:10)